Computer Technical Notes & Sharing Softwares: Web Development with PHP
Efficient Remote Access software
Variables လေးအကြောင်းသွားရအောင်။ PHP မှာ Variables ပေးတဲ့အခါ .Net နဲ့လုံးဝ မတူတဲ့ အပိုင်းရှိပါတယ်။ .Net မှာ Variable ကြေငြာရင် DataType ကိုထည့်ပြီးကြေငြာရပါတယ်။ PHP မှာ တပန်းသာတာက အဲဒီလိုမျိုးမလိုပါဘူး။ Variable ကို Declare လုပ်မယ့်နေရာမှာ Value တန်ဖိုးကို တန်းထည့်လိုက်ရုံနဲ့ အဲဒီ Variable ရဲ့ ValueType ကိုပြောပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်ပြီးထူးခြားတာက Variablename တွေရဲ့ အရှေ့မှာ $ Signလေးထည့်ပေးရပါတယ်။ ကဲ သူ့ရဲ့ Syntax လေးကိုကြည့်ရအောင်။
Variable ကို declare လုပ်တဲ့ Syntax ပါပဲ။ Example :
$variable = “4”; အဲဒါဆိုရင် String DataType တစ်ခုကိုလက်ခံထားတဲ့ Variable ပါပဲ။ Number ကို declare လုပ်ချင်ရင်တော့ double-quote မလိုပါဘူး။ တခါတည်း Assign ထည့်လိုက်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်ခု သတိထားရမှာက Case-sensitive ပါပဲ။ ကိုယ်က Variable name အစကို အကြီးစာလုံးများပေးမိရင် ပြန်ခေါ်သုံးတဲ့ နေရာမှာလဲ ကြေငြာထားတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်ရပါမယ်။ ခဏခဏ ဘာလို့ပြောပြောနေရတာလဲဆိုရင် errors တက်တဲ့အခါ အဲဒါမျိုးတွေပဲတက်နေတာ ခဏခဏ တွေ့ နေရလို့ပါ။
PHP variable နာမည်ပေးရင် သတိထားသင့်တဲ့အချက်လေးတွေပါ။ များများစားစားမရှိပါဘူး။ ၄ချက်ထဲပါ။ ကြည့်ရအောင်။
1. စစချင်းမှာ letter or underscore နဲ့စလို့ ရပါတယ်။
2. Alpha-numeric characters (a-z, A-Z, 0-9) and underscores တို့ နဲ့ ရောပြီးလည်းကြေငြာ လို့ ရပါတယ်။
3. စာလုံးတစ်လုံးထက်ပိုပြီး ကြေငြာချင်ရင် underscore or ‘-’ လေးခံသုံးလို့ရပါတယ်။
4. ဒါမှမဟုတ်ရင် နောက်စာလုံးကို အကြီးရေးပြီး ကြေငြာလို့ရပါတယ်။
ကဲ နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက PHP Codes ထဲမှာ double-quote (“ ”) ကြားထဲမှာ double-quote (“ ”) ပြန်သုံးလို့ မရပါဘူး။ သုံးချင်ရင် (\_“) ခံသုံး ဒါမှမဟုတ်ရင် Single-quote (‘ ’) သုံးရပါမယ်။ Single-quote ဆိုရင်တော့ သူ့ပြောင်းပြန်ပေါ့။ Open-source ဖြစ်တဲ့ Java သင်ဖူးတဲ့လူတွေအတွက် ဆိုရင်တော့ မစိမ်းလှပါဘူး။
နောက်အကြောင်းရာတစ်ခုက String အကြောင်းပါ။ တော်တော်များများသိတာက String စာကြောင်းတစ်ကြောင်း ထည့်မယ်ဆိုရင် double-quote ကြားထဲမှာ ထည့်ရတာလောက်ပဲ သိကြပါတယ်။ PHP မှာဆိုရင်တော့ Heredoc ဆိုတဲ့ ပုံစံကြေငြာ ပြီးသုံးလို့ ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြသွားမှာပါ။ သိပ်ပြီးသုံးတာတော့ မရှိပါဘူး။ သိထားအောင်လို့ သာ ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
Echo $my_string; // variable ရှိ တန်ဖိုးကို ပြန်ထုတ်ပြတဲ့အတွက် double-quote ထဲမှာထည့်ရေးစရာမလို။
စမ်းကြည့်ကြည့်ပါ။ သိပ်တော့အသုံးမများ ပါဘူး။
PHP Operators လေးတွေ အကြောင်းဆက်ပြောရအောင်။
Operators (၄) မျိုးရှိပါတယ်။
1. Assignment Operators
4. String Operators
5. Combination Arithmetic & Assignment Operators တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ Assignment Operators လေးရဲ့ ဥပမာကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။
Example: $another_var = 4;
ဒါကတော့ another_var ဆိုတဲ့ variable ထဲကို integer4ဆိုတဲ့ကောင်ကို assign လုပ်လိုက်တာပါ။ အဓိကပြောချင်တာက = ဆိုတဲ့ operator ကို assignment operator လို့ ခေါ်တာပါ။
ကဲဒုတိယတချက်ဖြစ်တဲ့ Arithmetic Operators လေးရဲ့ အကြောင်းကိုလည်းကြည့်ရအောင်။
1. + (Addition)
2. – (Subtraction)
3. * (Multiplication)
4. / (Division)
5. % (Modulus) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ နောက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ Comparison Operators လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်။
1. == (Equal To)
2. != (Not Equal To)
3. < (Less Than) 4. > (Greater Than)
5. <= (Less Than or Equal To) 6. >= (Greater Than or Equal To) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ String Operators လေးကိုလည်း ကြည့်ရအောင်။
$c= $a . $b;
Echo $c . “!”; ကဲအဲ့ထဲမှာ ပြောချင်တာကတော့ variableaနဲ့ variablebကြားထဲမှာ ဆက်စပ်ပေးလိုက်တဲ့ operator လေးကိုပြောတာပါ။
ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Combination Arithmetic & Assignment Operators လေးကိုကြည့်ရအောင်။
1. += (Plus Equal: Eg: $x+=2;)
2. -= (Minus Equal: Eg: $x-=2;)
3. *= (Multiply Equal: Eg: $x*=2;)
4. /= (Divide Equal: Eg: $x/=2;)
5. %= (Modulo Equal: Eg: $x%=2;)
6. .= (Concatenate Equal: Eg: $x.=2;) ကဲ ဥပမာလေးတွေနဲ့ပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ နားလည်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
PHP Comments လေးအကြောင်းကိုဆက်ပြောသွားပါမယ်။
Single Line Comment ကိုပိတ်ချင်ရင်တော့ // or # ကိုသုံးလို့ ရပါတယ်။
Multiple Line Comment ကိုပိတ်ချင်ရင်တော့ /*………………….*/ ကိုသုံးရပါတယ်။
ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Include Function & Require Function အကြောင်းကိုဆက်ပြောပြပါမယ်။ အဲ့ဒီနှစ်ခု အလုပ်လုပ်ပုံကိုရှင်းမှရပါမယ်။ စတင်ပြီးလေ့လာမယ့်လူတွေအတွက်ကို ပြောတာပါ။ ကဲ Include Function ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံလေးကို ကြည့်ရအောင်။
သူ့ သဘောက external CSS သဘောအတိုင်းပါပဲ။ မြင်ရတဲ့အပိုင်းရော မမြင်ရတဲ့အပိုင်းရော အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပြောတော့ External CSS ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို သိမှရတော့မှာပေါ့။ external css file တစ်ခုကို html ကနေပြန်ခေါ်သုံးပြီး browser မှာ run လိုက်တဲ့အခါ CSS အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကို မမြင်ရတဲ့ အပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ browser မှာတင်Run လိုက်တော့ css style တွေအလုပ်မလုပ်လည်းပဲ Errors တက်သွားပြီး ရပ်တန့်သွားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ html စာသား တွေကို ကုန်အောင်အလုပ် လုပ်သွားပါတယ်။ အဲဒါ မမြင်ရတဲ့ အပိုင်းမှာပါအလုပ်လုပ်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ အဲ့လိုတော့ နားလည်ထားပါတယ်။ ကဲ ဆိုတော့ include function လည်းဒီအတိုင်းပါပဲ။ file missing ဖြစ်နေလည်း echo statement တွေကို အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကဲ require function ကတော့ ပြောင်းပြန်ပေါ့။ သူ့ ကိုအသုံးပြု ပါတယ်။ တချို့ Website တွေ ကိုယ်ပေးမကြည့်ချင်တဲ့ website မျိုးဆိုရင်ပေါ့ ဒါလေးနဲ့ သုံးလိုက်ရင် ရပါတယ်တဲ့။ တခါမှတော့ Require ကိုတော့ စမ်းမသုံးဖူးပါဘူး။ ကဲ နောက်သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ looping အကြောင်းကို နောက်အပိုင်းမှာ ပြောပြသွားပါမယ်။
Posted by SLIP at 1:13 PM